Bogga ugu weyn / blog / Mowjadda Qabow Ayaa Mar Kale Dillaacday! Alaabada Musqusha, Sidee looga Hortagaa Qabowga?
2021 / 04 / 11 Qoondayntablog 6004 0
Mawjaddu wali ma yarayn, mowjad ayaa mar labaad bilawday, hawo qabow oo xoog leh oo soo noqota!
Cimilada ayaa qabowda, intaas waxaa sii dheer in dadku ay tahay inay fiiro gaar ah u yeeshaan kuleylka oo ay ku daraan dharka, qalabka nadaafadda ee guriga ayaa sidoo kale noqon kara ka hortagga barafka. Biyaha ku jira wax ka yar -4 darajo Celsius, mugga barafka waa la ballaariyay, wuxuu si fudud u horseedayaa alaabada fayadhowrka ee barafka iyo biyo balaarinta isla markaana kor u qaadaya alaabada dillaacsan. Waxaan kuu soo dirayaa talooyinka nadaafadda ee ka hortagga qaboojinta!
Musqusha xilliga qaboobaha si looga hortago qabowga iyo taxaddarrada taxaddarrada
Xilliga jiilaalka, albaabada musqusha iyo daaqadaha ayaa si ku-meel-gaar ah loo xiray si loo joojiyo hawo-qaadashada loona ilaaliyo heerkulka gudaha. Si looga hortago qabow, fadlan sii daa inta harsan oo dhan marka musqusha aan la isticmaalin.
Habka iyo tillaabooyinka waa sida soo socota: xir waalka tubbada, fur oo ka saar qolka bullaacadda, oo adkee aaladda bulaacadda ka dib marka la soo daayo biyaha haray, haddii kale waxay sababi doontaa dheecaan biyo ah.
Waxaa jiri doona biyo xaga dambe ee musqusha. U isticmaal calallada isbuunyada iyo bamgareynta si aad u nuugto biyaha si aadan u qaboojin oo u dillaacin musqusha muddo dheer.
Intaa waxaa dheer, waxaad ku shubi kartaa qaboojiyaha haanta biyaha, ama biyaha khamriga, cusbada, waxay yareyn kartaa barta barafka ee biyaha, laakiin sidoo kale anti-qaboojinta wax ku oolka ah. Haddii musqusha u furan tahay nidaamka kuleylka, oo ay hubin karto in musqusha aysan barafowayn, kuma dari kartid qabow qabow musqusha.
Taxaddarrada dayactirka saxanka jiilaalka
Isla marka la isticmaalo ka dib, ku qalaji maro qalalan si aad uga fogaato dillaac dusha ka yimaada oo uu sababo baraf. Markaad nadiifinaysid, ha u isticmaalin qalabka nadaafadda ee birta ah si aad uga fogaato inaad xoqdo dusha saxanka. Xaaladda heerkulka gudaha ee hooseeya, waxaad dooran kartaa inaad ku daboosho saxanka weel maro ah si aad uga daboosho dillaaca heerkulka hooseeya.
Taxaddarrada dayactirka barkadda qaboobaha
Ugu horreyntii, adeegsi kasta oo ka mid ah barkadda qubeyska, ka dhig barkadda qubayska oo qallalan, si aysan u keenin cillad biyo-baxeed muddada-dheer ama dusha sare oo aan loo isticmaali karin. Waqtiga nadiifinta, ha u isticmaalin aashitada adag iyo nadiifiyeyaasha alkaliinka si aad uga fogaato daxalka dusha weelka qubeyska. Ku masax maro jilicsan si aanad u keenin xoqitaan, iyo haddii uu jiro xoq yar oo shil ah, isla markiiba nadiifi dusha sare si loo soo celiyo habsami u socodka. Ha dhigin walxaha birta dusha weelka qubeyska si aad uga fogaato miridhku ama waxyeelada dusha ka gaadha saxanka qubeyska, saamaynta ay ku yeelanayso quruxdiisa iyo wax qabadkeeda.
Taxaddarrada dayactirka golaha musqusha xilliga qaboobaha
Musqusha ka dib marka la maydho, waa inay ahaato mid dusha sare ka muuqata musqusha dusha sare, nadiifinta masaxda biyaha. Qolalka musqusha waxaa badanaa lagu dhejiyaa qaar ka mid ah saabuunta, wejiga lagu maydho, shaamboo iyo agabyada kale ee lagu nadiifiyo, haddii si shil ah loo baxo, waxaa fiican in isla markiiba la nadiifiyo, waxyaabaha culus waa in la dhigaa salka qolka musqusha. Markaad nadiifinayso qolka musqusha, ha isticmaalin silig bir ah, maro Pasteur, xoqista kiimikada adag, hana u isticmaalin biyo inaad ka fogaato daxalka. Si habboon u isticmaal nadiifiyayaasha dhexdhexaadka ah iyo dayactirka alaabooyinka kale ee xirfadleyda ah.
Taxaddarrada ka hortagga qaboojiyaha ee tubbada qasabadda jiilaalka
(1) qasab frost fack crack.
0 ℃ ka hooseeya isticmaalka deegaanka, oo ay ku jiraan laakiin aan ku xaddidnayn sababaha soo socda.
1, baaritaanka kahor-biyoodka mashruuca kadib, qasabada biyaha haray lama demin.
2, rakibaadda qasabada banaanka, ma xirto waalka tubada biyaha, mana sameynin difaac ka hortag ah.
3, milkiiluhu wuxuu ku maqanyahay fasax ama waqti dheer oo aan deganeyn, qolku ma kululayn, ma uusan xirin waalka biyaha laga soo galo si loo faaruqiyo haraaga biyaha haraaga ah. Mulkiilihii wuxuu dhammeeyay dayactirka qolka hawo qaadashada, daaqadaha lama xiri jirin habeenki, iyo waalka tubada biyaha looma xirin si biyaha haray looga sii daayo tubada.
(2) Sida looga hortago tallaabooyinka.
0 ℃ ka hooseeya isticmaalka deegaanka, oo ay ku jiraan laakiin aan ku xaddidnayn taxaddarrada soo socda.
1, heerkulka deegaanka ee rakibaadda qasabada qasabada sida ka hooseysa 0 ℃, waxaa lagugula talinayaa in si ku meelgaar ah aan loo dhigin qasabad ama lagu rakibin biyo aan kumeelgaar ahayn oo aan biyo ahayn, ama tijaabada biyaha kadib marka si fiican loodaadiyo tuubada.
2, habeenkii waa inuu xiraa daaqadaha jikada, musqusha banaanka iyo sidoo kale qolka gadaal hadhka leh si loo hubiyo in heerkulka gudaha uu ka sareeyo 0 ℃.
3, qolka meesha heer kulka gudaha uu ka hooseeyo 0 ℃, xir qasabadda mitirka biyaha gudaha oo dhammee sii deynta biyaha harsan ee tuubada.
4, heerkulka gudaha ayaa ka hooseeya 0 ℃ qolka, wuxuu u baahan yahay inuu furo kuleylka, ka dhig heerkulka kor ku xusan 0 ℃.
5, waxaad isticmaali kartaa suufka iyo dharka linenka ah, dharka suufka duugga ah, cudbiga suufka ah iyo qalabka kale ee madhxiya si aad u weynaato ugana duubto qasabad adag.
Hore:: Musqusha ku rakib shelf, musqusha isla markiiba ku noolow 5 mitir oo laba jibbaaran! Next: Musqusha Guriga, Musqusha Darbiga Musqusha? Mise Musqusha Musqusha?